The Ab Presents Nepal » खुसीको खबर ,बल्ल कोरना भाइरसको औषधि चीनले नै पत्ता लगायो !
खुसीको खबर ,बल्ल कोरना भाइरसको औषधि चीनले नै पत्ता लगायो !
यो जनावरबाट सर्ने एक प्रकारको भाइरस हो। तर नयाँ भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको पनि पुष्टि भएको छ चीनमा । अहिले संक्रमण फैलिएको भाइरस कोरोना समूहका अन्य भाइरसहरुसँग नमिल्ने भएकाले यसलाई २०१९ नोभेल कोरोना भाइरस नाम दिइएको छ।अनुमान गरिए अनुसार जनावरबाट नै नयाँ भाइरसको सुरुवात भएको भनिए पनि यही जनावर भनेर पत्ता लागिसकेको छैन। अरु भाइरसमा यही जनावरबाट सर्छ भनेर भन्ने गरेका छौँ तर यो नयाँ भएकाले भन्न सकिन्न।
कोरोना भाइरस (कोविड-१९) विरुद्धको भ्याक्सिन (खोप) बनाउन सफलता मिलेकोे दाबी गरेको छ। कोरोनाका कारण विश्व नै प्रताडित बनेका बेला यस्तो खबर सार्वजनिक भएको हो।यो खोपलाई चिनियाँ सेनाको तिनै मेजर जनरलको टीमले बनाएको हो, जसले केही वर्ष अघि एसएआरएस (सार्स) र इबोला जस्ता ख’तर’नाक भाइरसविरुद्धको खोप बनाएर विश्वलाई खतरामुक्त बनाएको थियो।
चिनियाँ सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मेडिकल विशेषज्ञ शेन वेईको नेतृत्वमा एक महिनादेखि वुहानमा भ्याक्सिन बनाउने काम थालेको थियो। वुहान त्यही सहर हाे, जहाँबाट काेराेनाकाे उत्पति भएकाे मानिन्छ।चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजनका अनुसार शेनको टीमले कोरोनाविरुद्धको खोप बनाउन सफलता प्राप्त गरेको हो। उक्त टीमले रातदिन लगाएर खोपको ‘क्लिनकल एप्लीकेशन’ तयार गरेको जनाइएको छ।
प्रकाशित मिति March 8, 2020